E nwere otu ìgwè ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m na-adịbeghị anya enwetatụbeghị ọnụ iji chọpụta ihe na-ezighị ezi na gị n'ụlọnga ụlọ ọrụ. Maka ọtụtụ akụkụ, ọ bụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na-agbasi mgba ike ma na-ana obere ụgwọ. Agencieslọ ọrụ na-ere ọfụma na-akwụ ụgwọ karịa ma na-agba mbọ obere. Nke ahụ bụ echiche nzuzu, amaara m, mana hụ ya ugboro ugboro.
Tingtọ na atụmanya gabigara ókè bụ isi ihe na-aga nke ọma - ịkwụwa aka ọtọ, ntọala ntọala, afọ ojuju ozugbo, ụkpụrụ ndị a na-akọrọ, na isi ihe dị mkpa bụ njigide na njigide nke ndị ahịa. O zughi ịkwụ ụgwọ opekempe maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ịkwesịrị ịnwe ohere imekwu!